Baolina kitra – “CAN 2019” :: Efa mivonona amin’ny tsy ampoizina hatrany ny Barea • AoRaha
Baolina kitra – “CAN 2019” Efa mivonona amin’ny tsy ampoizina hatrany ny Barea
Toy ny tamin’ny lalao niahonana tamin’ny Super Eagles, avy any Nizeria. Miomana ary efa mivonona amin’ny tsy ampoizina hatrany nyBarean’i Madagasikara, hifa­nandrina amin’ny Léopards, avy any amin’ny Repoblika Demokratikan’i Congo (RDC), amin’ny alahady ho avy izao.
Lalao ampahavalon-dalana voalohany ho an’ny Malagasy eo amin’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika ity hotanterahina ity, raha
indimy no efa niatrika izany ny RD Congo, taorian’ny niovana anarana. Teo aloha dia efa tonga indimy teo amin’io dingana io izy
ireo, raha mbola Zaire no anaran’ ny firenena tamin’izany ary indroa voahosotra ho tompon’ny amboaran’i Afrika (1968, 1974). Laharana faha-49 ny Léopards, raha ny filaharana navoakan’ny Federasiona iraisam-pirenen’ ny baolina kitra, tamin’ny 14 jona lasa teo.
Ara-taratasy dia matanjaka ny ekipam-pirenen’ny RD Congo. Efa nanamontsana antsika tamin’ny alalan’ny isa 6 noho 1 izy ireo, tamin’ny fifanintsanana ho an’ny CAN 2016, tetsy Mahamasina. “Hanatanteraka ala vela izahay amin’ity fifandonana manaraka ity”, hoy i Adrien Melvin, tany amin’ny tambajotran-tserasera “Facebook”.
“Mbola tsy teo aho tamin’izany fifandonana izany. Ny mpilalao amin’izao ihany koa tsy ireo niady ny voninahi-pirenena teo aloha. Amin’ity CAN ity efa tsara ny vitan’ny Barea. Matoky aho fa mbola mahavita tsara noho ireny izy ireo”, araka ny voa­la­zan’i Nicolas Dupuis.
Tamin’ity andiany faha-32 ho an’ny CAN ity indray dia efa nisedra faharesena indroa ny ekipan’ny RD Congo, teo anatrehan’i Ouganda (2 – 0) sy Ejypta (2 – 0). Samy hisolo tena ny vondrona A eo amin’ ny ampahavalon-dalana ireo ekipa telo ireo. Fandresena roa, teo anatrehan’i Nizeria (2 – 0) sy Burundi (1 – 0), sy ady sahala tokana teo ano­loan’i Guinée (2 – 2) no vitan’ ny Barean’i Madagasikara, teo amin’ny dingan’ny fifa­nintsanana. Samy manana mpilalao nahatafiditra baolina betsaka, roa avy, na ny Léopards na ny Barea, dia i Cédric Bakambu sy Carolus Andriamahitsinoro.
Vonona ny haka ny amboara mitsy ny RD Congo raha ny nambarany any amin’ny tambajotra. Mametraka ny Léopards amin’ny toerany kosa ny Barea saingy mikasa ny hanome vokatra tsy ampoi­zina indray. “Hotohizanay hatramin’ny farany ny CAN. Isan’ireo mety hitondra anay amin’izany ny fiaraha-mientana. Marina fa kely izahay saingy ity farany sy ny filalaovana amin’ny fo no tanjakay”, hoy i Faneva Ima Andriantsima, kapitenin’ny Barea.
Sendra Rabearimanana & Roméo Andriamihaja
Teknolojia sy fandriam-pahalemana :: Hanampy amin’ny fanaraha-maso eto an-drenivohitra ny orinasa Huawei
Fijoroan’ny Antenimiera vaovao :: Niresaka momba ny fanovàna ny governemanta ny Filoham-pirenena